Afhayeenka Xukuumadda oo loo qaaday dalka Turkiga | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliuya - Afhayeenka Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Ibraahim Macalimuu, oo shalay ku dhaawacmay qarax lagula eegtay degmada Waabari ee Goboka Banaadir, ayaa galabta loo qaaday dalka Turkiga, halkaas oo lagula tacaali doono xaaladdiisa caafimaad.
Sida uu sheegay Agaasimaha Warfaafinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Liibaan Cabdi Cali, dhaawaca Afhayeenka Xukuumadda, oo u badan lug iyo gacan ayaa ka fudud sidii la filayay, waxaana dhawaan garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle, looga qaaday diyaarad qaas ah.
“Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa ballan qaaday in xukuumaddu ay dadaal ku bixin doonto baxnaaninta dhaawaca Afhayeenka oo shalay qof naftii hallige ah la beegsaday Qarax”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay xaafiiska Rooble.
Beegsiga Macalimuu, wuxuu abuuray doodo amni oo xooggan, waxaana siyaaday shaki hore loo qabay oo la xariira in Kooxda Al-Shabaab, si daran ugu dhex milan yihiin xaafiisyada sare ee dowladda.
Shacab iyo siyaasiyiin, si adag kaga carooday weerarka ka dhanka ahaa Mucalimuu, ayaa Xaafiiska Farmaajo iyo Taliyihii hore ee NISA, eedeysane Fahad Yaasiin ku eedeeyay in ay wax ka ogaayeen qaraxa, maadaama sidaan oo kale, loo bar-tilmaameedsaday masuuliyiintii ugu sarreysay Warbaahinta Qaranka, oo hormuud u ahaa in la mamnuuco baahinta waraaqaha sharci darrada ah ee xaafiiska Farmaajo ka soo baxa.
Dadka u dhuun duleela howlaha amniga, siyaasiyiinta iyo bulshada ka war-qabta xaaladaha siyaasadeed ee dalka ayaa Howl-wadeennada Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha ugu baaqay in ay amnigooda ka taxadaraan inta ay xaaladda waddanku sidaan yahay.
Maxamed Ibraahim Macalimuu, wuxuu laf-dhabar u ahaa warbaahinta xaafiiska Ra’iisul Wasaraha, wuxuuna door fiican ku lahaa hab-qoraalka, tabinta iyo bulsho u soo bandhigidda xogaha xaafiiska Wasiirka 1-aad.